Worms | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Worms | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Nke ukwuu-hụrụ n'anya video egwuregwu mgbe ọtụtụ sequels ugbu a converted n'ime a video oghere site Blue Bipute Cha Cha na ọ na-mara dị ka Worms. a Cha cha Nọgidenụ Gịnị Ị Win slot comes with three different bonus rounds and all of them carry huge win potential.
Banyere Developer nke Worms
Ke akpatre 50 afọ, Blue Bipute Gaming mepụtara dị iche iche ihe egwuregwu ma offline na online casinos. The egwuregwu mepụtara site na ụlọ ọrụ nwere witty na ụtọ gameplay. The Cha cha Nọgidenụ Gịnị Ị Win oghere bụ ihe ọzọ na-enye obi ụtọ oghere mepụtara ha.
Nke a ise-esi anwụde na iri ise paylines oghere bụ a Cha cha Nọgidenụ Gịnị Ị Win ohere mpere. The video egwuregwu nke otu aha bụ a oke hit na egwuregwu na 90. Otu ikpuru firing agha bombu na-reprized na ohere mpere version site Blue Bipute na mmekota na mbụ creators. The nzọ ego àmà site 50p kwa atụ ogho ka £ 100 kwa atụ ogho. a Cha cha Nọgidenụ Gịnị Ị Win oghere retains obi na-adị na agwa nke mbụ egwuregwu. The akara na-odide si mbụ version iche n'ebe ole na ole egosighị mmetụta kaadị oyiyi.
The bonus atụmatụ a oghere na-:
Worm daashi- Nke a bụ multi-larịị gburugburu na ike ga-butere site ọdịda atọ crate bonus chụsasịa na atọ n'etiti esi anwụde. Mgbe na ohere ka bonus gburugburu gị mkpa iji bulie a bonus crate nke unlocks otu n'ime atọ atụmatụ.
Crate Ụzọ Mgbapụ Daashi- Ekpughe Angry Scot ga-ekwe ka i tinye a egwuregwu ebe ị-eburu crates na-achọpụta a ego ego, ọgwụ kit, ma ọ bụ a ngwá agha. The ahụ ike gị irighiri na-belata a ngwá agha mgbe ahụ ike na kit mma ya.
Space nzọ ụkwụ Daashi- The Space Worm-eme ka ị banye a egwuregwu ebe ị họrọ a toolbox aiming ọganihu na ohere nzọ ụkwụ. Teleport eziga gị idide ka a n'ọkwá ka elu na nzọ ụkwụ. Ma ngwá agha ọgụ irighiri na ọ bụrụ na ọ na-kụrụ mgbe ahụ gburugburu okokụre e.
Free spins Battle Daashi- Ikpughe malite ịgba sagenti Worm kpọghee egwuregwu a. The Battle Worms ga-egosi na etiti ukwu dị iche iche na-arụpụta. Ahụ ike gị na-ebelata site Paireti Worm mgbe Medi-Worm mma ya. E nweghị ịgba na free spins ebe a ma ha akwụsị mgbe ahụ ike gị esịmde efu.
a Cha cha Nọgidenụ Gịnị Ị Win ohere mpere bụ a oké egwuregwu na ọrụ na-enye ego agba. The oghere ese akwa ma na-amara nke na-ewu ewu video egwuregwu si 90.